Adobe wuxuu joojin doonaa hormarinta Adobe Flash | Androidsis
Adobe wuxuu joojin doonaa hormarinta Adobe Flash
Shirkadda Adobe waxay joojineysaa soosaarida Adoble Flash Player ee qalabka mobilada. Ama ugu yaraan taasi waa waxa ay xanta sheegayaan, wararka xanta ah ee umuuqda in lagu xaqiijiyey xil ka qaadistii 750 shaqaale Adobe ah.
Tallaabooyinkii ugu horreeyay ee Adobe aad uma fiicnayn. Bilowgii Apple waxay horey u joojisay isticmaalka Adobe Flash qalabkaaga mobilada, sidaa darteedna, waxay ahayd in laga raadiyo bedelka ku saabsan Android. Intaas waxaa sii dheer, wax badan kama aysan tarin in dhammaan bogagga internetka ay si tartiib tartiib ah ugu wareegayaan HTML5.
Hoos ayaan turjumay hadalada ay sameeyeen Adobe:
Shaqadeena mustaqbalka ee Flash-ka ee aaladaha mobilada ayaa diirada saaraya awood siinta horumariyeyaasha Flash si ay ugu abuuraan barnaamijyo asal ah Adobe AIR dhamaan dukaamada arjiga. Mar dambe kamala qabsan doonno Flash Player moobaylka bog furayaasha cusub, noocyada ama qaabeynta nidaamka. Dadka qaar ama hay'adaha qaarkood way sii socon karaan oo waxay bilaabi karaan waxqabadyadooda. Waxaan sii wadi doonaa inaan ku taageerno qaabeynta hada jirta Android iyo PlayBook leh balastarro hagaajiya cilladaha muhiimka ah ama cusboonaysiinta amniga.
Kuwo aan aqoon Adobe Flash Player, waa qalab loogu talagalay daalacayaasha shabakadaha oo u oggolaanaya soo saarista waxyaabo badan oo warbaahin ah sida fiidiyowyada, ciyaarta tooshka, animations-ka, iwm. Tusaale cad waa ciyaaryahanka YouTube-ka, ciyaaryahankaas wuxuu ubaahanyahay Flash Player inuu shaqeeyo.
Tani waxay umuuqataa inay tahay war yar, maxaa yeelay sidaan idhi websaydhyada waxaa loo qoondeeyay HTML5 mana saameyn doono annaga mustaqbalka fog. Laakiin dhab ahaantii waxaan la kulannaa kacaan naga dhigaya inaan helno khibrad isticmaale fudud, fudud, helitaan iyo dhaqso leh.
Tan waxaa ugu wacan xaqiiqda ah in Flash Player ku mashquulsan yahay ilo fara badan aaladahayaga (oo aan ku xusno batteriga) iyo ku baalasha Flash Flash-ka waxyaabaha ay ka kooban tahay ayaa ka dhigi kara biraawsarkayaga mid aan xasillooneyn oo sababi kara khasab xiritaankiisa. Waxyaabaha haddii HTML5 si rasmi ah loo jaangooyo, dhibaatooyinkaas oo dhan waa laga hortagi lahaa oo hagidda iyo isticmaalka moobiilka (iyo batteriga sidoo kale ;-)) waa la horumarin lahaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Adobe wuxuu joojin doonaa hormarinta Adobe Flash
Waxaan sidoo kale faallo ka bixiyay bloggeyga, ugu dambeyntii waxay umuuqataa in Steven Jobs uu saxan yahay.
Waxaan u maleynayaa in walxaha kala geddisan ee kiniiniyada android-ka ee la xiriira io uu ahaa flash.
Hadda kala fogaanshaha u dhexeeya labada weyn ayaa sii ballaaranaya.
in xk wanaagsan taageerada ay siiyaan Linux ay tahay wax laga yaqyaqsado !!!!!
sidoo kale waxaan tijaabinayaa ciyaaryahanka html5 ee aan abuuro YouTube-ka si weyna uma shaqeeyo mana dareemo ^^!